Askar Faransiis ah oo ku dhintay Weerar ka dhacay Maali.
Tuesday May 05, 2020 - 14:00:05 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka Maali ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika ayaa sheegaya in weerar cusub lagu dilay ciidamo katirsan soo duulayaasha Faransiiska.
War rasmi ah oo kasoo baxay madaxtooyada looga arrimiyo dalka Faransiiska ayaa lagu sheegay in ugu yaraan hal askari Faransiis ah lagu dilay qarax ka dhacay waqooyiga wadanka Maali maalintii Isniinta.
Qaraxa ayaa haleelay kolonyo ciidamo ah kuwaas oo howlgal islaam ladirir ka waday Maali, howlgalka loogu magac daray Barkhaan ee Faransiisku hoggaamiyo ayaa isna sheegay in ay laba laabeen weerarada ay ku qaadayaan jamaacada jihaadiga Nusratul Islaami walmuslimiin.
Jimcihii lasoo dhaafay qarax ka dhacay bartamaha Maali waxaa lagu dilay askari kale oo Faransiis ah taas oo ka dhigay in khasaarihii ugu xooganaa sanadkan uu gaaray ciidamada xukuumadda Paris ee Maali ku duulay.
Shabakadda France24 oo soo xiganaysa saraakiil melleteri ayaa baahisay in miinooyin ay dhulka ku aaseen xoogag Jihaadiyiin ah oo Alqaacidda ku xiran ay khasaara lixaad leh gaarsiiyeen melleetriga Faransiiska.
Kumanaan askari gummeystayaal faransiis ah ayaa sanaddii 2013 duullaan cirka iyo dhulka ah ku qaaday dalka Maali xilligaas oo jamaaco jihaadi ah ay qabsatay inta badan wadanka ayna yagleeshay nidaam islaami ah oo tadbiiqiyay Shareecada Islaamka.